Ahlala isikhathi esingakanani amapayipi wamabhuleki ebhayisikili? - Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > Ungashintsha nini ama-pads brake pads - izinqumo ezisebenzayo
Ungashintsha nini ama-pads brake pads - izinqumo ezisebenzayo
Ahlala isikhathi esingakanani amapayipi wamabhuleki ebhayisikili?
KanjaniAmapayipi Amabhuleki Amade Ahamba Isikhathi Eside Ekugcineni? Impilo yakho endeamapayipi amabhuleki ebhayisikilikuya ngemvamisa yokusetshenziswa, izimo zemvelo, kanye nokunakekelwa. Umthetho ojwayelekile wesithupha yilokhoamabhuleki amabhulekicanokokugcinaphakathi kwamamayela ayi-500 1000.
Ungawashintsha kanjani ama-disc brake pads akho. Sizokuqondisa isinyathelo ngesinyathelo ngenqubo yokususa nokufaka. Kungakhathalekile ukuthi ibhayisikili lakho noma isitayela se-disc brake, sikhona ngawe.
Hlala nathi ukwenza umsebenzi wenziwe kahle futhi ufunde ochwepheshe abambalwa ohlangothini -Amathiphu. Ama-pads adinga ukushintshwa lapho agugile noma angcolile, noma kwezinye izimo imathiriyeli yephedi idinga ukuguqulwa ngezizathu zokusebenza. Ngolwazi, ungavele ubheke amaphedi bese wazi ukuthi adinga ukushintshwa yini.
Ngokuvamile, iphedi idinga ukushintshwa - Izinto ezibonakalayo ziwugqinsi okungenani olungu-1mm, ngokufaka amakhadi ebhizinisi ama-3 ungakha igeji yesikhashana yokuzwa ecishe ibe ngu-1mm ubukhulu. Lawa ma-pads angamaphedi amasha sha adinga ukushintshwa, kepha hlola umenzi wakho ukuthola imininingwane yokugqoka bese usebenzisa i-caliper ukuthola izilinganiso ezinembile. Izinto ezingcolisayo ezinjengamabhuleki oketshezi, uwoyela, noma amafutha zingalimaza amaphedi akho futhi akulula ngaso sonke isikhathi ukuwabona.
Amapayipi wamabhuleki angcolile angenza amabhuleki akho ancwine, kungadinga umzamo owengeziwe kuma-levers ukukwehlisa ijubane, futhi i-rotor kanye namapads kungavela kumnyama, ngamafutha angathanjiswa. Imithombo evamile yokungcola yi-overspray evela ezintweni zokugcoba ze-aerosol noma ukuvuza ohlelweni lwe-hydraulic. Ukuthenga ama-rubbers amasha afanele ohlelo lwakho kulula ukusho kunokukwenza.
Ungahlala uthola isitolo esihle sebhayisikili, letha ibhayisikili lakho bese ucela usizo. Ungabheka futhi okokuqhafaza okubukeka kufana nokwakheka kokudala kwakho. Uma inesimo esifanayo, ukubopha kwakho kungenzeka kusebenze.
Ama-pads eza ngezinto ezehlukene: i-metallic, organic, kanye ne-semi-metallic. Izici zazo ziyavezwa kulo mfanekiso. Kungase kube nezinkinga zokuhambisana phakathi kwento eyi-rotor ne-pad material.
umakhenikha webhayisikili eduze kwami
Bheka zonke izexwayiso Amathuluzi ajwayelekile adingekayo yile: Iphoyinti lenaliti lamabhuleki anezikhonkwane zekhotter noma amapayipi aqinile Ithuluzi elinendawo eyisicaba efana ne-PP-1.2 ngokucindezela ku-piston Isikulufini esifanelekile, iheksagoni noma isikrufu esivumelana neTorx sokugcina izikhonkwane nezilungisi. Khweza ibhayisikili endaweni yokulungisa.
Susa isondo. Sizohamba ngokususa umklamo ngamunye we-caliper owaziwayo ukuze ukwazi ukubona obukeka njengowakho. Eminye imiklamo inephini lokugcina elivikela amapayipi.
Uma ikhona eyodwa, isuse. Lo mklamo usebenzisa iphini elihlukanisiwe. Qondanisa ukuphela ukuze ususe.
Manje sesingakhipha amapads ngezansi. Eminye imiklamo inesiqeshana sepeni. Uma ikhona, yisuse ngaphambi kokususa iphini yokubamba.
Ngalesi sakhiwo singakhipha amapads phezulu. Ezinye izinhlelo zephedi zisebenzisa isiphethu esisuswa ngamaphedi. Qaphela ukuthi amaphedi amasha eza nentwasahlobo entsha.
Kodwa akuwona wonke amabhuleki asebenzisa iziphethu. Lo mklamo usebenzisa uzibuthe ukubamba amaphedi kuma-piston. Uma i-brake yakho ingenayo iphini lokugcina, hlola ukubona ukuthi ngabe intwasahlobo iphuma phezulu.
Lo mklamo udinga ukuthi intwasahlobo isuswe kuqala, lapho-ke ungasusa amaphedi angezansi, uma amaphakethe ebambeka kungasiza ukukhulula i-adjuster. Lo mklamo awunayo intwasahlobo ephumayo noma iphini lokugcina, khipha iphedi yangaphandle kuqala, ngoba kwesinye isikhathi akunakwenzeka ukususa ingubo yangaphakathi kuqala. Uma ama-pads enamathela, khulula i-adjuster.
Lo mklamo usebenzisa isiqeshana kuphedi ukuwubeka endaweni yawo. Kungathatha amandla athile ukususa amaphedi asikiwe. Esibonelweni sethu sokugcina, bamba iphedi, uyihambise, bese udonsa.
Susa intwasahlobo futhi. Futhi yilokho okususwe. Uma ungakaboni i-brake yakho ngqo, uma kungenzeka ukuthi ifane nomunye wemiklamo esivele ikhonjisiwe, ama-piston kufanele ahoxise ngokuphelele.
Lokhu kudala isikhala sezinto ezengeziwe zephedi kuma-pads amasha we-hydraulic brake calipers, simane siphushele ama-piston emuva ngethuluzi elifana ne-PP-1.2, i-lever tire noma i-cone wrench. QAPHELA: I-TRP High Road kufanele iphathwe njenge-brake hydraulic.
Noma ngabe kukhona ikhebula, izinto ezakhelwe ngaphakathi zingu-hydraulic. Uma une-Shimano hydraulic brake enentaba eyisicaba, qaphela kakhulu ukufaka ingcindezi kuma-piston ukuze ungalimazi ama-piston e-ceramic. Uma ucindezela ngengozi i-lever brake lever, ama-piston ayabuya futhi kuzofanele uphinde uwaphinde ku-caliper.
Ukucindezela okufanayo kuyasebenza ngemuva kokufaka ama-pads. Uma ngephutha ucindezela isigwedlo, mane ucindezele ama-pads emuva ngethuluzi elifana ne-PP-1.2 piston elinezihlalo zemishini ze-PRESSEFÜR, vula i-adjuster ubheke ngakuwashi lize liyeke.
Abanye abakhongi banokulungiswa okungenamathuluzi futhi abanye badinga amathuluzi. Abanye abakhongi banezilungisi ezimbili kanti abanye banayo eyodwa. Manje njengoba ama-piston ehoxiswe ngokuphelele singaqala ukuhlanganisa amapads.
Ukufakwa ngokuyisisekelo kuphambene nebanga futhi kulesi sibonelo sidlula ezinhlotsheni ezahlukahlukene zamabhuleki. Inothi elisheshayo: amaphedi afakwe kahle ayaxega kancane, futhi lokhu kuvamile. Kulesi sibonelo, odonsa babamba ama-pads kuma-piston.
Sidinga ukuhlanganisa iphedi yangaphakathi kuqala, bese sifaka iphedi engaphandle. Futhi sesiqedile. Lesi sibonelo sisebenzisa odonsa, kepha akunandaba ukuthi iyiphi iphedi oyifaka kuqala futhi inephini lokugcina.
Lo mklamo usebenzisa isiqeshana kuphedi ukuwubeka endaweni yawo. Kungathatha amandla ukufaka amaphedi asikiwe. Kule modeli kukhona intwasahlobo yokugcina amaphedi acindezelwe ngokumelene nama-piston.
Eminye imithombo idinga ukuba sesimweni esifanele Ukuqondiswa ukuze kuqondaniswe. Ngemuva kokufaka amapayipi entwasahlobo, udinga ukuvumelanisa kahle amaphedi futhi usebenzise amandla athile ukubenza bachofoze endaweni. Lokhu kungathatha ukuzama okuningana ukuvumelanisa kahle amaphedi nemithombo.
Kulesi sibonelo, ama-pads angena kuqala bese kuthi intwasahlobo ingene. Kule modeli sifaka amapayipi, iphini eligcinwe ngentambo, bese kuba isiqeshana sephini. Lesi sibonelo sisebenzisa iphini elihlukanisiwe, ngakho-ke kudingeka siqiniseke ukuthi iphini lokuhlukanisa lithola ukugoba okuhle.
Kokubili abakhalipha abasebenza ngomshini nangokubacindezela, hlanganisa isondo futhi uqiniseke ukuthi lihleli kahle. Ngama-disc disc brake, ngemuva kokufaka ama-pads amasha uzodinga ukuqondisa kabusha abashayeli bakho. Bona le enye indatshana.
Ngamabhuleki e-hydraulic disc, phampa isigwedlo ukubuyisa ama-piston namaphakethe endaweni yokusebenza. Vula isondo bese uhlola ama-Brake pads ngokuqondaniswa. Khanyisa i-caliper ukuze ibonakale kangcono.
Uma kungekho ukungqubuzana, usuqedile. Uma uhlikihla, mhlawumbe inkinga yokuqondanisa. Bheka i-athikili yethu yokuqondiswa kwamabhuleki wokubacindezela.
Manje njengoba ama-pads akho amasha esekhona, usukulungele ukugibela. Uma ngabe le ndatshana ikusizile, sicela ubhalisele isiteshi sethu. Ukugcinwa kwamabhayisikili ukuxubana okuphelele kokulula nobunzima, njengoba konke kulula ngokwanele ukuba kube nengqondo, kepha kusenezingxenye eziningi ezihambayo zonke okufanele zisebenzisane ukuze zisebenze kahle.
Futhi uma umusha esiteshini sethu, qiniseka ukuthi ubheka izindatshana zethu ezingemuva zokulungiswa kwesipisi. Banempendulo enhle futhi bazokwenza amashifu akho ahambe ngokushelela. Siyabonga ngokubuka.
Ngazi kanjani ukuthi ama-brake pads ami agqokile?
Kuhlolaimpilo yeibhuleki pad, kumelenqumaubukhulu bayo. Ungahle udinge i-flashlight ukuze ubuke kahle i-ibhuleki pad. Uma ngabepadsibukeka izacile, ingaphansi kuka-1/4 ', kungahle kube yisikhathi sokuyifaka esikhundleni. Kwezinyeamabhuleki amabhuleki, ungahlebhekaukugqokainkomba slotphansimaphakathi ne-iphedi.
Wazi kanjani ukuthi amabhuleki akho ebhayisikili awalungile?
Hlolaukubonaumaiindlela ithiicwebezele ngaphezu kokulondolozwa:Umaawukwazi ukungena kuwo ngozipho, udinga okushaamabhuleki amabhuleki. (Ngenkathi usezansi lapho,isheke lokuhlolaukushuba: Iningipadsbabe nemigqa yenkomba yokugqoka, kephaumahhayi, sebenzisa ama-grooves njengenkomba yakho.Umaasisekhoamabhuleki amabhulekiidinga ukushintshwa.)04.30.2010
Ukulandela i-athikili yethu ye-TLC yama-disc brakes, besinemibuzo eminingi ye-TLC yamabhuleki erimu. Futhi ngingubani mina ukuthi ngikudumaze? Ngakho-ke nazi izeluleko eziyisikhombisa zokusebenzisa amabhuleki akho ukwehlisa ijubane ungakuvumeli wehle. (umculo onamahloni) Ngakho-ke ukuhlola ama-rubbers akho kuzokusiza kungakephuzi kakhulu.
Amabhuleki amabhuleki angaphela ngokushesha ngokwesabekayo, ikakhulukazi esimweni sezulu esibi. Ngakho-ke okokuqala, hlola ukuthi usale nempilo engakanani. Amanye ama-brake pads mahle impela ngoba anezinkomba ezincane ezikutshela ukuthi uzishintsha nini.
Kepha abanye abakwenzi. Futhi umthetho omncane wesithupha ungaphansi komamilimitha nohhafu wengxube yamabhuleki ngakho-ke usesele futhi sekuyisikhathi sokukufaka esikhundleni. Ngakho-ke bheka i-pad brake pad yakho uqobo bese ubona ukuthi iphela kanjani.
Uma bezicaba futhi bezingeni, kulungile. Uma kune-groove kungadinga ukufayilwa bese ihlelwa kabusha ukufanisa indawo yokubhabha. Ngakho-ke inkinga ngamaphakethe angahlelwanga kahle ukuthi ngeke ume ngempela ukuze ufinyelele amandla akho aphelele.
Ngakho-ke kungenzeka ukuthi ubopha amabhuleki ohlangothini lwethayi noma empeleni kwenye indawo onqenqemeni lapho indawo eqinile yokubhabha ingekho. Ngokuyinhloko kuyingozi futhi ngeke nje uthole ukusebenza okudingayo. Lapho uqondanisa amaphedi amabhuleki, kubalulekile ukuthi ngaphambili kwephedi kuthinte irimu, uhhafu wemilimitha ngaphambili ngemuva.
Yebo yimali encane engiyaziyo futhi uma ukwazi? Uma ungeke ukwazi ukuthola leli zinga lemininingwane khona lapho ungakhathazeki, vele uqiniseke ukuthi iphedi lonke lixhunyiwe ngasikhathi sinye. Okubaluleke kakhulu, nokho, ukuthi emuva kuthinta kuqala. Ngakho-ke hlola isilinganiso sangempela sokuwohloka kwezakho ngakho-ke bheka ukuthi ngabe esinye sazo siphela ngokushesha yini kunesinye.
Vele uqiniseke ukuthi i-brake igxile. Kungadingeka ukuthi ukhulule isikulufa sangempela sokubopha lapha bese umane usiqondanise noma ulungise isikulufa sokugxilisa lapha ukuze uqiniseke ukuthi zombili izinhlangothi zithinta iRimat ngasikhathi sinye. Ngakho-ke ake sibheke kahle ama-brake pads uqobo.
Uma unemigwaqo noma iziteshi kuyo, bheka ngokucophelela futhi ubone ukuthi akukho yini ukungcola noma amatshe. Uma kunjalo, zikhethe ngoba zizonciphisa ukusebenza kwakho ngamabhuleki. Lezi kwesinye isikhathi azinakwa, izingcezwana zensimbi ezincane zifakwa enkampanini yamabhuleki.
Lokhu futhi kunganciphisa ukubopha amabhuleki nokugqoka okomugqa ngaphambi kwesikhathi. Ngakho-ke thola lokhu nje bese uqinisekisa ukuthi konke sekuphelile. Kwesinye isikhathi ama-brake pads wakho angakhanya empeleni, futhi uma enza, awasebenzeli ukusebenza kwawo ngokugcwele.
Ngakho-ke engikutusayo sebenzisa ifayela noma. Manje uma usebenzisa ifayela qiniseka ukuthi awulisebenzisanga ensimbi noma uzobe uhlehlisa isinyathelo esedlule esisanda ukumboza. Ngakho-ke uzobe ubeka insimbi emuva kuphedi.
Hhayi lokho esifuna ukukwenza lapha. Ngakho-ke noma usebenzise ifayili elenjoloba kuphela noma i-sandpaper ethile bese ususa nje ungqimba oluncane kakhulu, olucwebezela ebusweni y, ama-brake pads wakho empeleni azonamathela kangcono kurimu futhi akubhuleke ngokushesha. Ngakho-ke manje hlola okusheshayo kwekhebula langaphakathi.
Qiniseka ukuthi ibambekile lapha, ukuthi ayishwabene noma ihlushwe nhlobo, bese kuthi uma kungenzeka, bheka ngaphakathi kwesigwedlo bese uqinisekisa ukuthi azikho izintambo zocingo lapho umgqomo omncane uxazululwa khona. Uma kunjalo, ungagibeli ibhayisikili lakho, shintsha ikhebula le-ASAP, qiniseka ukuthi kulungile nokuthi igobolondo elingaphandle elivikelayo alihlukaniseki nakancane futhi akukho ukugqwala lapho. Uma kunjalo, shintsha lokho.
Manje amabhuleki akho angazizwa enesizotha, nokulungiswa kwesikhashana ngoba awukho umuzwa ongcono kunokufaka izintambo ezintsha, empeleni ukufaka amaconsi kawoyela bese uwasebenza, kepha kanjani? Yebo, ukwenza lokho kufanele uphendule ibhayisikili lakho ubheke phansi, engingavumi ukulivuma, kepha yebo, vele ubeke amaconsi ambalwa kawoyela, iTeflo n-based, futhi uvumele amandla adonsela phansi enze umlingo wawo futhi izogqoka leyontambo. Izintambo eziningi zesimanje, noma kunjalo, sezivele zigcotshwe i-Teflon, okungukuthi i-liner yangaphakathi neyangaphakathi yekhebula langaphandle.
Uma kunjalo kuwe, mane ulume inhlamvu bese ufaka izintambo ezintsha. Ngiyethemba ukuthi lezi zingcezu zothando oluncane lwamabhuleki erimu zikusizile. Futhi ngaphandle kwalokho, ngifuna ukwazi ukuthi uwathanda kanjani amabhuleki akho omugqa phansi lapho esigabeni sokuphawula salesi sihloko nabangane bakho.
Futhi uma usasebenzisa amabhuleki erimu ngemuva kwakho konke lokhu, chofoza lapha ukubona ukuthi ungawanakekela kanjani amabhuleki ediski, mhlawumbe uzokwenza ushintsho lwenze.
Kubiza malini ukufaka ama-brake pads esikhundleni?
I-izindleko zokubuyiselwa kwephakeji ezijwayelekilecishe u- $ 150 nge-asi ngayinye, kepha leziizindlekoingakhuphukela ku- $ 300 nge-asi ngayinye kuye ngemoto yakhoibhuleki padizinto zokwakha. Okungabizi kakhuluamabhuleki amabhulekisebenzisa izinto eziphilayo.
Khuphula izinjini zakho, namhlanje ngizokhuluma ngama-braking system emotweni yakho. Lapho izinto ezithile zenzeka, bakutshela ukuthi sekuyisikhathi sokuthi kulungiswe amabhuleki. Inkinga evame kakhulu manje ukuthi, ama-brake pads avele aguge, ushaye amabhuleki bese uqala ukuzwa umsindo, manje lawo maphedi wamabhuleki asemihle impela, ayancipha, kepha awatholakali insimbi emuva lapho impahla yephedi incane kakhulu ukuthi ithungwe ngezinsimbi emuva uzozwa imisindo esabekayo njengoba insimbi igudla i-rotor, amanye amapayipi amabhuleki manje anezikhencezi ezincane, ziyinduku yensimbi encane eza iphume futhi lapho ama-pads akho ezaca, leso sipikishi esincane sizophuma i-disc brake futhi uzoyizwa iduma ngenkathi ushayela.
Uma uzwa lo msindo hamba uye emasondweni akho bese uwahlola, bheka ukuthi amaphedi amabhuleki mancane ngempela. Ezimotweni eziningi ezifana nale Lexus, kulula ngokwanele ukuthi amasondo anezimbobo ukuze ukwazi ukungena ngethoshi uzibone ukuthi ziwugqinsi kangakanani, futhi kulokhu ziminyene ngakho awudingi ukuzishintsha , kepha nangu umkhabi, sithi uyabezwa bekhala, kepha ngemuva kwesikhashana ukukhala sekuhambile, awu, isikhulisi esincane sensimbi singanqamuka, lapho-ke awuzwa umsindo kuze kube yilapho insimbi isensimbi futhi sekwephuzile. Ngakho-ke uma uzwa lokho kutetema kungumqondo omuhle ukuwahlola ukuze uqiniseke ukuthi awazacile yini futhi sekuyisikhathi nje sokushintsha okokufakwa phezulu, nokuyinto eshibhile ongayenza njengamanje noma ikuphi okunye okunye, izinto azihlali njalo elula, imvamisa amabhuleki ezimoto avele anciphise ngoba ama-disc avezwa emoyeni kanye nama-rotor rust ngoba enziwe ngensimbi, futhi bavame ukwenza imisindo emincane njalo, futhi uma uwasebenzisa cebula ubone ukuthi, hey kunenqwaba yamabhuleki asele futhi akukho lutho olumuncu futhi akukho ukuvuza okungamanzi, futhi abantu abaningi bazovele baphile nalokho futhi babone ukuthi njengoba bekhula, amanye amabhuleki ancwina nje njengoba bekhula njengethiphu yoku-oda Ukuyeka imisindo yokukhala izeluleko zami bu y high quality brake pads, ngazitholela mathupha i-Akebonoa ke Bo Ngiyazi ukuthi iyinkampani yaseJapan, ama-pads yiwona angcono kakhulu engake ngaba nawo amakhasimende asebenzisa ama-rotors awo ngama-pads abo amadala gen kodwa bebengafuni ukuwachitha imali eningi emotweni endala ngoba ibingenamsoco ngakho ngivele ngafaka I-Akebonopads ivuliwe futhi ayibanga nomsindo ngemuva kwalokho ngakho-ke zilungile kakhulu padsnow into elandelayo ejwayelekile engahambi kahle ngamabhuleki Okungukuthi, ushaya ibhuleki kodwa uyacwila phansi, mhlawumbe hhayi ngaso sonke isikhathi, kepha kwesinye isikhathi, manje kunezinto ezintathu ezingenza lokho, ezimbili kulula ukuzihlola, kepha okwesithathu uhlelo lwe-ABS akunjalo, ngakho-ke ake siqale ngokulula, uma unyathela i-brake pedal kukhona induku ehamba nge-bulkhead, bese kuthi ngaphansi kwesigqoko semoto induku iphushe i-master cylinder ethumela uketshezi wokubacindezela kuwo wonke amasondo, ngakho-ke isizathu esivame kakhulu ukuthi unyathele isigqebhezana sakho samabhuleki bese sishaya phansi ukuthi kunokuvuza ku-Sy stem ndawo thile, ngakho-ke iya esondweni ngalinye kuqala, ubheka okokubamba ukuthi ngabe kumanzi yini futhi akunjalo, kunepayipi lenjoloba, ipayipi lenjoloba lingavuza bese uhlola isondo ngalinye ngale ndlela ukubona ukuthi alikho yini noma yikuphi ukuvuza, manje uketshezi lwamabhuleki lucacile futhi lucebe kakhulu.
Ngakho-ke uma ufuna ukwenza isiqiniseko sokuthi yizinto ezifanele, vele ubeke okuthile eminweni yakho, uyabona ukuthi iyashelela ngempela, inephunga eliyingqayizivele, futhi ubona ukuvuza bese udinga ukulungisa leyo ndawo evuzayo, manje ukuvuza kwangaphandle kulula ukuthola, uzobona indawo ivuza futhi konke kuzoba manzi, kepha kwesinye isikhathi amasilinda amakhulu ngokwawo ahamba kabi, kepha angonakala kabi njenge-valve yenhliziyo embi, angavuza ngaphakathi kwawo, uwine uma awukwazi ukubona noma yini evuzayo, kuzofanele ususe i-master cylinder, futhi uma ubona ukuthi iqolo limanzi, kusho ukuthi liyavuza noma kwesinye isikhathi livuza kuphela ngaphakathi futhi abacindezeli, uma ngabe usebenzisa njengamanje enye i-master cylinder yenza futhi i-insta Kulungile, uma kungeyona inkosi iba nzima, kungaba yi-booster booster, emuva nansi i-booster booster aft booster, amandla okuqinisa ukukunika amabhuleki, futhi uma i-booster ikwephula ungakwazi thola iphedali eliya phansi, kepha nansi indlela yakudala yokuyihlola lapho t i-engine isemotweni ipakiwe ushaye amabhuleki futhi yinhle futhi inzima, kepha bese uyayimisa imoto bese ushaya amabhuleki ashaye phansi wow leyo 'yindlela enhle yokuhlola ukuthi i-booster imbi nini imoto iyagijima futhi i-booster inamandla ayo aphelele bese i-pedal yehla, kusho ukuthi i-booster ihambe kabi, kepha kunesimo ezimotweni zesimanje lapho ibhuleki yehlela ezansi okuyinkimbinkimbi kakhulu futhi kuyabiza ukukhanda Kunamasistimu amabhuleki anzima kakhulu, ungabona ingcindezi yamabhuleki eza ku-master cylinder iya kule valve enkulu ye-solenoid enama-valve, ikhompyutha iyasebenza, amasondo anezinzwa ze-ABS ezilinganisa en ukuthi amasondo ajikeleza ngokushesha kangakanani futhi ikhompiyutha ifunda ijubane imoto ezofinyelela kulo ukubona ukuthi wonke amasondo ayama ngejubane elifanayo noma uma enye ime kancane kunamanye izolingisa njengaleyo Break brakes ukuze ungadonsi uhlangothi noma olunye futhi uma lolu hlelo lwehluleka kufanele ube ne- c ikhompiyutha eyinkimbinkimbi efana nale Launch X431 futhi ngisebenzise lokho ngochwepheshe bemishini, kufanele sihlaziye uhlelo lwe-ABS, sihlole wonke ama-actuator, sihlole izinzwa zejubane futhi kaningi uma unenhlanhla izoba nekhodi ye-ABS futhi okungenani sizothola endaweni ejwayelekile lapho inkinga ikhona ukuze sikwazi ukuthola iphutha bese sililungisa, ngaphandle kwesizathu, sokuthi awukwazi ukukwenza ngokwakho ekhaya, kodwa ngenhlanhla, amasistimu e-ABS ayizinhlelo ezingaphephile ezimotweni eziningi zesimanje. Ngakho-ke uma uhlelo lwakho lwe-ABS luhluleka futhi ilambu lakho le-ABS lifika ezimotweni eziningi, lizobuyela ebhulekini ejwayelekile engeyona eye-ABS futhi ungamisa imoto yakho kahle, ngeke nje ibe nohlelo lwamabhuleki alwa nokukhiya, ngakho-ke uma kunjalo, isondo nokushayela Amanzi nokuyishayela emgwaqeni owomile iyashelela futhi kufanele ngithi amakhasimende ami amaningi lapho ngihlaziya inkinga ye-ABS ngithola ukuthi badinga i-modulator entsha futhi i-modulator ibiza cishe amadola ayishumi nanhlanu, uzothi, yebo yebo, ngiphila ngaphandle kwe-ABS futhi nginamabhuleki ajwayelekile kuphela futhi noma ngabe othile ekutshele ukuthi udinga i-modulator awukwazi ukuyibuyisela ngokwakho ngoba ukuze uphume umoya kuzo udinga enye yalawo makhompyutha inezinyathelo ezahlukahlukene ezivula futhi zivale ama-solenoids ukususa umoya ohlelweni futhi uma ufaka entsha entsha izogcwala umoya futhi ingenza enye yalezi umsebenzi wangempela kwesinye isikhathi kuthatha amahora amathathu noma amane ukukhipha wonke umoya ohlelweni futhi ithiphu lami lokugcina uma sikhuluma ngomoya ohlelweni abantu abaningi bazothi, oh, ngidinga ukopha amabhuleki ami, nginomoya ohlelweni, ngopha kahle amabhuleki, uma kungekho msebenzi owenziwe emotweni, akukho okuzokulungisa ngempela ng , ngoba uma kunomoya ohlelweni kunesizathu sokuthi kukhona umoya ohlelweni, mhlawumbe i-master cylinder iyamunya umoya, mhlawumbe ipayipi liyavuza futhi uma ususa unyawo lwakho kubhuleki izomunca umoya, kodwa kuthiwani uma unomoya? Kuhlelo lwakho, ufuna ukuthola ukuthi kungani bese uyilungisa. Ungacabangi ukuthi ukukhipha umoya kuzolungisa yonke into ngokwayo.
Manje njengoba usunolwazi oluthe xaxa ngamabhuleki futhi wazi ukuthi uwahlola nini nokuthi wenzeni ngawo ukuze ukwazi ukushayela ngokuphepha emgwaqeni ngaphandle kokushayisa abantu. Ngakho-ke uma ungalokothi ufune ukuphuthelwa ezinye zezindatshana zami ezintsha zokulungisa izimoto futhi, qiniseka ukukhala insimbi!
Kubiza malini ukubuyisela ama-brake pads nama-rotors?
Okupheleleukulungisa amabhulekieyodwa efakapads,Rotorfuthi ukushintshwa kwe-caliper kuvame ukuba phakathi kuka- $ 300 no- $ 800. Kodwa-ke, ngokuya ngemoto nemodeli yemoto yakho, ungasebenzisa kalula ngaphezu kwe- $ 1,000 ngokupheleleibhulekiumsebenzi.
Ungakwazi yini ukushayela ngamapayipi amabi amabhuleki?
Njengobathinakusho, kuqhubekaukushayela ngamapayipi amabhuleki agugilekuyingozi, futhiwenaakufanele neze uvumele i-padsfinyelela laphoungakwaziuzwe umsindo onzima, wensimbi wokugaya. Umsindo wokugaya umsindo wensimbi onensimbi, futhi uyakhombisaamabhuleki amabhulekiokube ngokuphelelekugugilephansi.
Ungakwazi yini ukuhlola ama-brake pads wakho ngaphandle kokukhipha amasondo?
Kholwa noma ungakukholwa, isikhathi esiningiungabheka padgqokangaphandle kokukhipha amasondo. Futhiwenaawudingiukuiziqu zobunjiniyela bemishiniyenzait. Imvamisa,ungakwazibona i-ibhuleki padngokusebenzisa i-isondofuthi ngeke ngidinge ukukwenzasusait. Kanyewenathola ifayela le-ibhuleki pad, qaphela ubukhulu bayo.
Kwenzekani uma ushayela ngamapayipi amabhuleki agugile?
Lapho ushayela ngokugqokilephumaamabhuleki amabhuleki, ama-rotor, noma ama-calipers,wenaungazithola ushaya igama le-ibhulekiunyawule kaningi ukunciphisa noma ukumisa imoto. Konke lokhu kunzimai-braking cangqokaeyakhoamathayi asheshe asheshe noma abangele ukuthi angalingani, okuholela ekugqokweni okungalingani kwamathayi.
ungayandisa kanjani i-mitochondria
Kufanele ushintshe wonke ama-brake pads ama-4 ngasikhathi sinye?
Kepha, lapho kuguqulwaamabhuleki amabhuleki,kufanele wenze konke okuneekanye? Yebo, okokuqala,wenangokuphelelekufanele ithathe indawo ye-zombili ngaphambili noma zombili ezingemuvaamabhuleki amabhulekiku-Ngisikhathi esifanayo. Ngaphandle kokuthi kukhona okungahambi kahle ngempela,umuntu kufanelezikhathele cishe ngesilinganiso esifanayo nesinye.01.04.2019
Ngingakwazi nje ukushintsha ama-brake pads?
IMP: Ngaphandle kokuthi ama-rotor agqoke ngaphezu kobukhulu bokulahla okudingekayo, sincamelabuyiselaipadskuphela. Lokhu akugcini ngokugcina imali, kepha nesikhathi. Kushapadskumele ishiswe ibe ngama-rotor amasha ngaphambi kokuba kufinyelelwe ekusebenzeni okuhle kwamabhuleki.18.07.2015
Ngidinga nini ukushintsha ama-brake pads ami?
Amabhuleki amabhuleki adinga ukushintshwa ngezikhathi ezithile, ikakhulukazi ebusika, njengoba eqoqa ubukhali obuningi nokungcola emigwaqweni emanzi. Kunezigaba ezimbili eziyinhloko zamabhuleki: amabhuleki erimu nama-disc brakes. Amabhuleki eRim - okungaba ama-v-brake noma ama-cantilevers - avame ukutholakala emigwaqeni noma emabhayisikili e-hybrid kuthi amaphedi abambeke erimu ukukumisa.
Kukangaki ama-disc brakes edinga ukushintshwa?
Ama-disc brakes avame ukutholakala emabhayisikili asezintabeni, amanye ama-hybrids, futhi muva nje emabhayisikili emigwaqo nase-cyclocross. Lezi zinama-brake pads abambelela kudiski maphakathi nesondo ukukumisa. Kuzona zozimbili lezi zinhlaka, amaphedi ayaguga ngokuhamba kwesikhathi futhi azodinga ukushintshwa, mhlawumbe amahlandla ambalwa ngonyaka kepha lokhu kuzoya ngokusetshenziswa.
Hlobo luni lwamapayipi amabhuleki asetshenziswa ngamabhayisikili asezintabeni?
Ama-disc brakes avame ukutholakala emabhayisikili asezintabeni, amanye ama-hybrids, futhi muva nje emabhayisikili emigwaqo nase-cyclocross. Lezi zinama-brake pads abambelela kudiski maphakathi nesondo ukukumisa. Uyawubona umehluko phakathi kwama-pads disc agugile nalawa amasha